Intuiton, lalao fanontaniana sy valiny izay manao laharam-pahamehana ny paikadinay | Vaovao IPhone
Intuiton, lalao fanontaniana sy valiny izay manao laharam-pahamehana ny paikadinay
Tianao ve ireo lalao kely? Amin'ity karazana lalao ity dia azontsika atao ny mampiseho ny fahalalantsika, fa ahoana kosa raha nanampy paikady kely ho an'ny cocktail isika? Raha nampiantsika dia antsoina hoe «cocktail» izany Intuiton, lalao ahafahantsika mifaninana amin'ireo mpilalao hafa hahitana hoe iza no mety hahazo ny fanontaniana betsaka indrindra, ary etsy ankilany, asehoy hoe iza no mahay mamolavola paikady tsara indrindra hanafoanana ireo mpanohitra.
Saingy, inona izany mba hialana amin'ny mpanohitra? Eny, Intuiton dia tsy a Fanontaniana sy valiny ara-dalàna; Efa maro amin'ireo karazana ao amin'ny App Store ireo ary farany tsy manome zava-baovao. Ny lalao lehibe ato amin'ity lahatsoratra ity, ankoatry ny fanontaniana, dia manampy singa hafa izay hahatonga ny zava-drehetra hahafinaritra kokoa, toy ny fiainana izay tsy maintsy tazomintsika hahatratra izay azo atao na hiezaka ny hamoy azy ireo.
1 Intuiton dia mampahafantatra fiainana amin'ny lalao tsy misy dikany
2 Ny mety hisian'ny "tripping", ny antony lehibe mahatonga ny fiankinan'izy ireo
Intuiton dia mampahafantatra fiainana amin'ny lalao tsy misy dikany
Ny mekanikan'ny lalao dia tsotra kokoa noho ny feony: hanombohana azy dia mila mpifaninana hifaninanana isika. Mba hahitana azy ireo dia azontsika atao ny mitady amin'ny alàlan'ny fifandraisantsika, amin'ny Internet na miandry azy ireo manasa antsika (zava-dehibe ny fananana fampandrenesana mavitrika raha izany no tadiavintsika). Raha vao efa namorona a vondrona mpanohitra, hiomana hanomboka ny lalao isika.
Ireo lalao ireo, araka ny efa noresahintsika imbetsaka, dia fanontaniana sy valiny. Satria mety ho sarotra be na tsy dia be loatra ho an'ny tsirairay ny manoratra valiny, Intuiton dia hanome valiny ho an'ny mpampiasa tsirairay (izany hoe, 4 raha 4 isika) ka ny mpampiasa tsirairay dia tsy maintsy misafidy iray. Ambonin'ny valiny tsirairay dia hiseho ny avatar ny mpampiasa nifidy azy, saingy tsy midika izany fa tsy afaka misafidy azy isika. Ary, ny zavatra hafahafa indrindra amin'ny lalao amin'ity karazana ity, ny iray amin'ireo valiny ihany no ho diso ary izany no ho valiny, amin'ny voalohany, dia mahatonga antsika hamoy ny iray amin'ireo fiainana 5 nanombohantsika ny lalao.
Ho fanajana ny rafitry ny fiainana, hanana izao manaraka izao isika:
Valiny marina: mitazona ny fiainana anananay isika amin'izany fotoana izany.
Valiny zaraina (ilay iray ihany no nofidian'ny mpampiasa iray hafa): ho very antsasaky ny fiainana isika.
Valiny diso: hahavery fiainana isika.
Tsy mamaly izahay: hahavery fiainana isika.
Amin'ny faran'ny lalao tsirairay dia zaraina izy ireo loka amin'ny endrika vola madinika azontsika atao ny mifanakalo fanatsarana sasany. Ny fanatsarana dia a Mpandroba fiainana, izay ahafahantsika mangalatra fiainana amin'ny mpifaninana, na ny Fialana andraikitra, izay hahafahantsika miverina amin'ny lalao rehefa lany ny aintsika, zavatra izay hataontsika amin'ny fiainana mitovy amin'ny mpanohitra izay nanana fiainana be indrindra rehefa namono anay izy ireo.
Ny mety hisian'ny "tripping", ny antony lehibe mahatonga ny fiankinan'izy ireo
Satria ny lalao dia tokony hiala voly ary handany fotoana, ny tsy fitovizan'ity lalao ity amin'ny hafa amin'ny lohahevitra mitovy amin'izany dia ny fiainana sy ny mety hitantanana azy ireo, na ny antsika na ny an'ny mpifaninana amintsika. Indrindra fa rehefa milalao amin'ny namana isika dia tsy misy mahasosotra antsika mihoatra ny olom-pantatra akaiky dia manao zavatra mandratra antsika amin'ny lalao zavatra iray. Fa raha misy mangalatra fiainana amintsika amin'ny lalao dia aza diso hevitra fa tsy hisy afa-tsy teny iray voasokitra ao an-tsaintsika: valifaty. Amin'ny lalao manaraka dia hiezaka ny hanao tsara kokoa izahay hanana ny mety hangalatra aina amintsika aminy ary mijery azy manaikitra ny vovoka. Saingy, raha manao izany isika, ny zavatra hataontsika dia ny mitondra ny rambony hanakaiky ny trondro iray izay tsy hitsahatra ny hitodika any aminy.
Ampahany mahafinaritra an'i Intuiton ihany koa ny fanaovana risika sasany - efa fantatsika fa misy valiny telo mitombina, fa ny sasany amin'izy ireo dia ho lojika kokoa noho ny hafa. Raha raisina izany dia azontsika atao ny misafidy valiny lojika kokoa ary mahazo bileta betsaka kokoa hahavery antsasak'adiny satria mpampiasa hafa no misafidy valiny mitovy na misafidy ny lojika kely indrindra amin'ny valiny marina manandrana tsy hamaly olona mitovy amin'ny ataontsika ary mitazona ny fiainana ho feno. Antsika ny fanapahan-kevitra.
Raha tianao ny lalao tsy misy dikany, dia tsy hanome anarana lohateny hafa avy amin'ny App Store aho, fa tsy maintsy ekentsika fa amin'ny farany dia monotonous daholo izany. Raha mitady rivotra madio ianao dia i Intuiton no toy ny 50 ho an'ny 15 amin'ny fomba hafa (Te-ho tapitrisa tapitrisa ve ianao?) Izay lalaovina amin'ireo mpampiasa marobe, izay tsy misy afa-tsy valiny diso iray ary manan-danja tokoa ny fiainana. Iza no manome bebe kokoa?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Intuiton, lalao fanontaniana sy valiny izay manao laharam-pahamehana ny paikadinay
Google Voice dia nohavaozina amin'ny famolavolana ny rindranasa ao anatin'izany ny iOS
Nohavaozina ny WhatsApp ary ahafahanao mandefa hafatra ivelan'ny Internet, ary maro hafa